Kaddib Guul La'aantii Xalay, Luis Suarez Oo Sheegay Wixii Ka Khaldanaa Kooxdiisa, Sababtii Uu Messi U Shaqayn Waayey Iyo Isbeddelka Ay Tahay Inay Sameeyaan - Gool24.Net
Kaddib Guul La’aantii Xalay, Luis Suarez Oo Sheegay Wixii Ka Khaldanaa Kooxdiisa, Sababtii Uu Messi U Shaqayn Waayey Iyo Isbeddelka Ay Tahay Inay Sameeyaan
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xalay barbar dhac goolal la’aan ah la gashay Athletic Bilbao oo ay marti ugu noqotay garoonka Estadio San Mames, halkaas oo labada naadi midkoodna awoodi kari waayey inay wax goolal ah dhashadaan.
Barbarrahan ay Barcelona gashay ayaa waxa uu fursad u yahay Real Madrid oo ay hadda ka horreyso lix dhibcood oo kaliya, halkii ay usbuuc ka hor hoggaanka kaga haysay toban dhibcood, sidoo kalena Atletico Madrid ayaa ay ka horreysaa horreysaa toddoba dhibcood, laakiin marka si guud loo eego, tartanka horyaalka LaLiga ayaa si dhab ah dib ugu soo noolaaday kaddib ciyaartan xalay.
Weeraryahanka Luis Suarez ayaa markii ay ciyaartu dhamaatay waraysi uu bixiyey waxa uu kusoo bandhigay wixii ka khaldanaa kooxdiisa, dhibaatadii haysatay iyo sida lagu xallin karayo.
SIDOO KALE AKHRISO: Kadib Dhaawacyada Lionel Messi & Luis Suarez, Qaabkuu Ernesto Valverde Ku Xalin Karaa Dhibaatada Weerarkiisa Ee Kulanka Adag Ee Real Betis?
“Qaybtii hore, waxaanu u xidhibaatoonay isku-xidh la’aan, waana arrin ay tahay inaanu xallino. Waxa aanu luminay kubbad-haysigii, waananu isgaadhi kari waynay.” Sidaas ayuu yidhi Suarez.
Weeraryahanka reer Uruguay waxa kale oo uu tilmaaay in kooxdiisu ay kulamo badan ciyaartay, halka ay Bilbao nasasho ku jirtay, hase yeeshee ay abuureen fursado ay goolal ku dhalin karayeen.
Dhibicda ay xalay heshay Barcelona waxa mahaddeeda iska lahaa goolhaye Marc-Andre ter Stegen oo badbaadiyey kubbado badan, waxaana Suarez uu ku sifeeyey inuu ka mid yahay goolhayeyaasha dunida ugu fiican.
“Waa sababta uu u yahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Mar kale ayuu taas muujiyey, waxaanu ka joojiyey inay gool naga dhaliyaa.” ayuu mar kale yidhi Suarez.
Dhinaca kale, waxa uu Suarez meesha ka saaray hadal haynta ah in aanu caafimaad qabin Lionel Messi oo uu weli dhaawacan yahay, waxaana uu yidhi: “Haddii uu ciyaaray, taaas macnaheedu waa in boqolkiiba boqol uu taam yahay, laakiin haddana way ku adkayd inuu ciyaaro, sababtoo ah si joogto ah ayaa khalad loogu gelayey.”
Barcelona ayaa waxay hoggaanka horyaalka LaLiga ku haysaa 51 dhibcood, Real Madrid oo kaalinta labaad ku jirtaana waxay haysataa 45 dhibcood, halka Atletico Madrid ay u degtay kaalinta saddexaad oo ay 44 dhibcood leedahay.